UMculo weAfrika 2020: IiNgoma ezi-5 abaHleli bethu abaKhutshiwe kule veki
U-Rema usithatha njengoMdyarho kwiBeamer yakhe + Emnye umculo waseAfrika abahleli bethu abaHlaziyiweyo kule mpelaveki
Yintoni eya ezantsi kwiiMbasa zeMifanekiso ye-NAACP ezingama-51 + Olona luhlu lubalaseleyo
Just njengoko ubushushu buqhubeka bukhula njengokuba sisiya kwiinyanga zasehlotyeni, iimvumi zase-Afrika ziphakamisa ubushushu xa kuziwa kumculo owakhutshwa ngo-2020. Kule mpelaveki, sibeke umculo oshushu waseAfrika ukuze unyakaze iinyawo zakho ngeli xesha lonyaka.
Rema ubuyile kwakhona ngendlela yakhe yeAfrotrap yomculo ongafakwanga nje ngabalandeli baseAfrika kodwa abalandeli baphesheya bayathetha. Iqela lomculo laseKenya, Sauti Sol ulahlile enye ingoma ekuncedeni ubonakalise uthando lwakho olungagungqiyo komnye ebalulekileyo. Kuloliwe oqhutywa luthando kukho umfanekiso otshisayo waseGhana, Isithembiso sikaKumkani ophose omnye umkhombe.
Ulibale ubushushu, jika ukhanyise i-air conditioner yakho kunye nezithethi zakho kunye ne-vibe kwezi ngoma zimangalisayo njengoko ulungiselela ingqondo yakho kwiveki ezayo.
Nazi ii-5 zeengoma zase-Afrika ezilandayo ezinokuthathelwa ingqalelo…
1. I-Rema ft Rvssian -Beamer
I-Mavin Record kunye ne-Jonzing World's entsha, iRema ikhuphe igama elitsha awayibiza ngokuba yiBeamer (Abafana Ababi). U-Beamer usebenza njengegosa lakhe lesibini elitsha kunyaka omtsha, liza emva nje kokuba ekhuphe i-remix yesi-Latin ye-monster hit irekhodi elinesihloko esithi 'UDumebi ' e qulethe Imvumi yehlabathi, Becky G.
Phambi kokukhululwa kwengoma, uRema wenziwa udliwanondlebe naye UZane Lowe kwi-Apple Music's Radio Show, ebetha u-1.
2. UkuThembisa kweKing- SISA
Irekhodi laseGhana elenzelwa iLifa leLifa leLifa lobugcisa ngaphambili UGregory Bortey Newman aziwa kakhulu njengeKing Promise ukukhahlela ngonyaka ka-2020 ngegama lakhe lokuqala elinesihloko 'I-SISA ' Oko kuthetha ukutshintsha kwaye kwaveliswa ngu Isazela uBeatz. Lo mculo yingoma yothando eyayiyeyona ndlela athembisa ngayo uKing Sthembiso indlela yokubonisa uthando lwaseAfrika.
Umculi weDr Dolor Entertainment kunye nombhali wengoma Teni Apata ikwabizwa ngokuba nguTeni ikhuphe enye eshushu emva nje konyaka ophumeleleyo ngo-2019. Ingoma enesihloko esithi 'tshata', eveliswe ngu JaysynthBeatz, kwaye ixutywe ngu MillaMix yimpendulo kubo bonke abo bambuza kwi-Intanethi ngomtshato.
4. USauti Sol - uSuzanne
Ibhendi labafana baseKenya, uSauti Sol bakhuphe eyokuqala yabo ngo-2020 ebizwa ngokuba yiSuzanne. Emva kokuchitha ixesha elininzi kulo nyaka uphelileyo beseka iileyibhile ezisandula ukwenziwa kunye nokusebenzela umculo weengoma zabo, iintshukumo zaseAfrika ekugqibeleni zakhupha ingoma yazo, ingoma yothando eyeyona nto iphambili.
5. Wande Amalahle-kwakhona
Amalahle eWande wabelana ngeyona ndlela yakhe intshaKwakhona', eyindlela yakhe yokuqala ka-2020. Amalahle eWande athathe izinto ezicothayo kumkhondo we-mido tempo oveliswe ngu UMelvitto. Ubonisa ukungaguquguquki kwakhe njengoko ecula kwisithandwa “esenza intliziyo yakhe incume.” Le ngoma ibonelela ngotshintsho oluhle lwesantya oluya kwenza ukuba ufune ukucula kunye.
Ityala lemifanekiso: Instagram | heisrema Umculo wase-Afrika 2020
iingoma ezishushu kakhulu Isithembiso seNkosi Amaculo New Naija Rema Sauti Sol Ingoma yemozulu Teni Amalahle eWande
UCollins Badewa Februwari 23, 2020
UNahomi Campbell ubhiyozela iNyanga yeNqaku eliMnyama Ngoluhlu loLuhlu lweeNgcali eziGuquliweyo
I-Rave News Digest: UBeyoncé Ufuna Ubulungisa ku-Breonna Taylor, Burnaboy kunye noRema Otyunjelwe i-BET, iCoronavirus Cure + Okungakumbi